12 Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 12 Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Russia, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Turkey, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Mavara, zvekumwe, uye inoshamisa muzvimiro nenzvimbo yekugara, iwe uchawana izvi 12 mhuka mhuka dzakasarudzika kuona muEurope. vanogara mukati megungwa rakadzika kwazvo, soro Alps, kana kuzorora mumasango akasvibira eEurope, ita chokwadi chekutarisa idzi dzinoshamisa mhuka dzesango pane yako inotevera kupukunyuka muEurope.
1. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Lynx yekuEurope
Kugara Switzerland, Furanzi, Itari, uye Czech Republic, European Lynx inzvimbo yakasarudzika yemusango. Iyo Lynx ine muswe mupfupi, shava shava nemavara, zviri nyore kuona musango rechando rechando.
Iwe uchawana iyi katsi yemusango rudzi runonakidza rwekatsi yekumba, uye neshiri dzinoona dzesango.
Ndekupi Kwandingaone Iyo European Lynx MuEurope?
The Bavarian Forest inzvimbo inoshamisa yekuona maLynxes nevana vavo.
2. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Puffin
Iwe unogona kuona izvi zvakanaka zvisikwa kubva pakati paApril nemakungwa egungwa. Semuyenzaniso, Skomer Island muWestern Wales inzvimbo inoshamisa yemhuka dzesango uye Puffin kutora mifananidzo. Pamusoro pe, iyo Brittany Coast ndeimwe nzvimbo inoshamisa kuyemura shiri yegungwa yeAtlantic.
Puffins anosvika kumusoro 30 cm murefu uye 20 cm pakukwirira. Uyezve, nemuromo weorenji uye kutenderera pameso, iwe uchaona kuti zviri nyore kwazvo kuona idzi dzakanaka shiri dzegungwa pamawere negungwa. ne 90% yehuwandu hwepasi rose huwandu muEurope, unogona kuyemura makoloni ese nemakungwa eEurope kwenguva zhinji yegore.
Ndekupi Kwandingaone Puffins MuEurope?
Iyo Brittany pamhenderekedzo muFrance uye Skomer Island inzvimbo dzakanaka kwaunogona kuona iyo Puffin.
3. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Saiga
Saiga inyoka yakasarudzika, zvinosuruvarisa, pangozi mazuva ano. Iyo Saiga ndeimwe yeiyo 12 mhuka dzakawanda dzakasarudzika dzaunogona kuona muEurope. Nemhino dzayo dzisina kujairika, iyi mhuka yakasarudzika inogona kuchinjika nyore kune inotonhora uye inopisa mamiriro ekunze, sezvo chimiro chemhino chinoshanda ichi chinangwa.
saka, iyo Saiga haina imba yakatarwa uye inogona kutamira kumusoro kusvika 1000 km pakati pezhizha nechando. Uyezve, inogona kufamba makiromita akawanda pazuva uye inonyanya kushanda mukati mezuva. Chinhu chinonakidza nezve Saiga ndechekuti pamusoro pezvirimwa nehuswa, inodya zvinomera zvine muchetura kune dzimwe mhuka.
Ndekupi Kwandingaone Ini Saiga MuEurope?
Unogona kuona iyo Saiga mumakomo akanaka eCarpathian uye masango.
4. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Iyo Pine Marten
Kana iwe ukaitika uchifamba musango reEuropean nemasango iwe ungango sangana neakasarudzika Pine Marten. Pine Martens vanogara mumakomba emiti uye vakanaka chaizvo vanokwira, saka ive shuwa kutarisa kumusoro kana iwe uchida kuona ichi chakakosha chisikwa.
Iyo Pine Martens iri mune chestnut-brown brown, nebhokisi jena jena rakakomberedza mutsipa. Naizvozvo nyangwe mumasango, zvichave zvakaoma kupotsa iyi inonakidza mhuka pabazi remuti, neiyo bhuru yero.
Ndekupi Kwandingaone Iyo Pine Martens?
Nzvimbo dzakakwirira muScotland neIreland, ndiyo nzvimbo dzakanakisa dzekuona iyo Pine Marten.
5. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: European Green Lizard
pa 40 cm muhukuru, zvichange zvichinyanya kuoma kupotsa iyo European green lizard. Dzvinyu rakasarudzika rine rakasvibira rakasvibira kumashure uye yero dumbu. Sezvineiwo, panguva yekusangana, varume vanoshanduka muvara kuva bhuruu inopenya.
Iyo Green Lizard inogara panzvimbo yakakwirira ye 2000 mamita, saka, apo iwe uchikwira kumusoro mumakomo eAustria, iva nechokwadi chekutarisa-tarisa. Kana iwe uri kufamba kubva mumatsutso kusvika kuchando, ipapo ungangozoona aya madzvinyu mumapako nenzvimbo dzakaoma dzekuhwanda. zvisinei, muzhizha, kutanga kubva munaKurume, kunaka uku kuchange kuchidziya mushana.
Ndekupi Kwandingaone Iyo Gwenzi Dzvutira?
Unogona kuona rino dzvinyu girini rakagara muzuva pamatombo, kuEurope, Ositiriya, Jerimani, kusvika kuRomania neTurkey.
6. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Pink Flamingo
Iyo yakanaka pink flamingo inogara mune imwe yeiyo akanakisa emhuka dzesango zvisikwa mu Europe. Iwo mafiringi anopinki anogara nemabhiza emusango anoshamisa muCamargue reserve muFrance. Iyo pink flamingo yazova mucherechedzo weCamargue, mumavara ayo anopenya epingi.
Mumadziva, marshland, kana kubhururuka mudenga, vachiratidza kunaka kwavo, iyo pink flamingo inoshamisa kuona. Sezvo iwe uchifamba kuburikidza 4 nzira muCamargue, iwe uchakurumidza kunzwisisa kuti sei shiri iyi iri imwe yeiyo 12 mhuka dzakasarudzika kuona muEurope.
Ndekupi Kwandingaone Ini Pink Flamingo Mune Iyo Camargue Reserve?
Iyo Camargue inzvimbo hombe yekuchengetera muFrance. Kuti uone iyi yakasarudzika shiri, musoro kune Ornithological Park.
7. Whale muIreland
Kana iwe zvikaitika kuti uri kufamba nechikepe muSouth yeIreland, kumwe kure kure, musoro unobhenda unogona kubuda kubva pasi pemvura. Iyi inogona kunge iri Humpback whale, whale inoyevedza uye hombe inogara mugungwa rakakomberedza Ireland.
Pasinei nehukuru hwavo hunoshamisa uye hunotyisa, 12-16 mamita, hazvikuvadzi uye zvinyoro. Aya marwenga akanaka anosvika mukupera kwematsutso, vachiimba nziyo dzavo dzakaoma, chinogara pakati 10-20 maminitsi.
Ndekupi Kwandingaone Ini Humpback Whale?
Scotland, Ayarendi, England yakanaka pakuona whale.
8. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Mhumhi
Inonakidza uye inotyisa, mhumhi ndeimwe yemhuka dziri panjodzi muEurope. Idzi mhuka dzakasarudzika dzinoenderana nyore nechero nzvimbo yekugara, mumavara avo ekufukidza, uye yakakura muhukuru. Kune marudzi akawanda emhumhi, asi avhareji mhumhi inogona kusvika kumusoro 70 makirogiramu.
Mhumhi dzinogara mumasango, mumapakeji, uye yaifunga mhuka dzakachengetedzwa zvakanyanya muEurope. Kune nzvimbo dzekuchengetedza uye matura ekuchengetedza mapere uye nekuapa iwo akanakisa mamiriro kuitira kuti arege kutsakatika zvachose.
Ndingawanepi Ini Mhumhi MuEurope?
Liguria mudunhu reItari, Sango reBavaria, uye Poland ndiwo mapere’ nzvimbo inodiwa.
9. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Ma dolphin
Kupwanya nekuimba mumvura dzegungwa reItari, ayo akanaka ma dolphin anoyevedza kuona. Nepo munhu wese angangove akaona ma dolphin mumifananidzo, mapaki emvura, kana nzvimbo dzinochengeterwa mhuka muEurope, hapana chinofananidza kufamba nechikepe uye kuyemura zvisikwa izvi zvakanaka.
Nguva yakanakisa yekuona ma dolphin iri muzhizha kana kuchidziya, uye iwe unogona kuenda kune dolphin-kutarisa chikepe kushanya.
Ndekupi Kwandingaone Ini MaDolphin MuItari?
The mahombekombe akanaka eCinque Terre uye gungwa reLigurian ndiyo nzvimbo yakakwana yekuona ma dolphin emusango MuItari.
Apo vanhu vazhinji vanonzwa “shark” iyo yakasarudzika maitiro ndeyekutsamwa uye kutya. zvisinei, iyo yakasimba Basking Shark inogona kunge iri hombe uye inotyisa muhukuru, asi shark iyi inongodya plankton.
saka, iwe unogona kunzwa wakachengeteka zvakakwana pane izvi 12 matoni uye 12 mamita hove. Iyo Basking Shark ndiyo yechipiri pakukura-shark muUK, uye zvakanakisa zvinoonekwa kubva kumawere munguva yezhizha. saka, kana iwe ukaona hombe yakakona katatu uye muviri wakachena, wobva wavheyesa hello uye gadzirira kamera yako yeBasking Shark snap.
Ndekupi Kwandingaone Basking Shark Inn Iyo UK?
kubva kuCornwell mhenderekedzo, Chiwi cheVanhu, uye mazhinji emahombekombe eWest England, iwe unogona kuona kubhasikita shark munzvimbo yavo yepanyama.
11. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Wolverine
Mess, Mess, izita remadunhurirwa remwolverine muchiLatin, rakashandurwa kuna Gluten. Iri zita risingazivikanwe rinokwana nhengo hombe mumhuri yeMustelidae – zvakakwana sezvo vaine chishuwo chikuru chisina kujairika.
Nechikonzero ichi, makudo anogona kufamba kure achitsvaga chikafu, uye zvino inogona kuwanikwa muEurope yose.
Ndekupi Kwandingaone Ini Wolverines?
nyanya, huwandu hwewolfver hwakanyanya muRussia, iyo Taiga, uye Asia. Uyezve, iwe unogona zvakare kuona wolverines mu iyo pakakwirira mhuka yemusango muUK.
12. Mhuka Dzakasarudzika Kuona MuEurope: Alpine Ibex
Kumusoro kumusoro 4000 mamita, pakati pemakomo echando ane makomo marefu, kumawere ematombo, iwe uchawana Alpine Ibex. Nenyanga dzinogona kukura kusvika 140 cm, iyi mbudzi yemumakomo imwe yemhuka dzinoyemurika uye dzakasarudzika muEurope.
Chekutanga, vanogara muEuropean Alps, iyo Alpine Ibex, hazvisi nyore kuona kana tichienzanisa neBasking Shark uye green lizards. kunze, mahwanda awo anoita kuti zvive nyore kuti Ibex ikwire kumusoro uye kutiza zvikara munzvimbo dzine matombo eAlps.
Ndekupi Kwandingaone Iyo Alpine Ibex?
Iwo maAlps eItaly uye Swiss Alps iva nezvishoma zvinoshamisa maonero yemhuka dzesango uye Alpine Ibex ichiona.
pano pa Save A Train, tichafara kubatsira kuronga rwendo kunzvimbo dzakanakisa dzekuona mhuka dzesango. A chitima rwendo mhiri Europe rakanakira kufamba kune dzinongoitika dzinogarisana izvi akasiyana mhuka muEurope.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "12 Yakawanda Yakasarudzika Mhuka Kuti Uone MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funique-animals-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#mhuka shamdara.blogshamdara MhukaInEurope MazhinjiUniqueAnimalsInEurope UniqueAnimals